January 19, 2021 - Online Hartha
တခြိနျက မငျးကိုဆေးထညျ့ပေးဖူးတဲ့အဘှားကွီးပါကှာ အခုမငျးရိုကျလုလို့ ဒဏျရာတှနေဲ့ နှုတျဆကျသှားပွီ
January 19, 2021 by Online Hartha
တချိန်ကမင့်ကိုဆေးထည့်ပေးဖူးတဲ့အဘွားကြီးပါကွာ အခုမင်းဆွဲကြိုး ရိုက်လုလို့ ဒဏ်ရာနဲ့ နုတ်ဆက်… မေတခု သားတခု ရှိတဲ့ ဘဝလေးကိုမှ လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ (ဆွဲကြိုး အလုခံရတဲ့ အမေကြီး ကွယ်လွန်ရှာပြီ) ၁၆.၁.၂၀၂၁(စနေနေ့) ၁၇.၁.၂၀၂၁(တနင်္ဂနွေနေ့) ရုံးပိတ်ရက် နှစ်ရက်ဟာ အိပ်မက်ဆိုး တစ်ပုဒ်လို ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တမ်း အိပ်မက် ဖြစ်ခဲ့ရင် အရမ်းကောင်းမှာပါပဲ။ ၁၅.၁.၂၀၂၁(သောကြာနေ့) ညနေကအမေ ရေချိုးခန်းရှေ့ ချော်လဲတယ် ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ အစ ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရုံး ကနေ အမြန် ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အတူ အမေ အဲဒီကတည်းက ဘာစကားမှ မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ ၁၈.၁.၂၀၂၁(တနင်္လာနေ့) မနက်မှာ အမေက ကျနော် အပါအဝင် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒဏ်ရာ အနေအထားအရ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ ပြုလုပ်မှုကြောင့်လို့ ပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး တရားခံကိုလည်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ … Read more
ဆီးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ရောဂါတှရှေိနရေငျတော့ ဒီPostလေးသိမျးထားပါ
ဆီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေရှိနေရင်တော့ ဒီPostလေးသိမ်းထားပါ ဆီးနီ၊ ဆီးဝါ၊ ဆီးချုပ်၊ ဆီးအောင့်၊ ဆီးပူး၊ ဆီးကျဉ်၊ ဆီးကျန် ဖြစ်ပါလျှင် အရှင်းပျောက်ကင်း ဆီးရောဂါကင်းစေသော ဆေးနည်းအား ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေပေါ်ကျွန်း ဆရာတော်ကြီးထံမှ အမှတ်မထင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားသည် ဆေးပညာ အလွန်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။ တပည့်ဝေနေယျများအား တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးနည်းများ ပေးသည်လည်း ရှိပါသည်။ “နနွင်း၊ ဆီးဖြူ၊ပျားရည်ကူက မလွဲသေချာ ဆီးရောဂါပျောက်၏” ဟု မိန့်ဖူးပါသည်။ ယုံစွာအမှန် လုပ်ဆောင်ရန်က ဝေဒနာရှင်၏ တာဝန်တည်း ..။ ယခုတင်ပြသော ဆီးရောဂါဆေးနည်းမှာ လူသိနည်းပါသည်။ ယောကျာ်းသား အတော်များများ ဆီးရောဂါမျိုးစုံ ခံစားရတတ်ကြပါသည်။ နနွင်းမှုန့် (၃) ပဲသား ဆီးဖြူသီး သတ္တုရည် (၁) ဇွန်းပျားရည်စစ်စစ် (၁) ဇွန်း ထိုသုံးမျိုးကို ရောစပ်ပြီး … Read more
Fb ခတျေစားလာသညျနှငျ့အမြှ ဖွဈပကျြလာတဲ့ ပတျဝနျးကငျြ စိတျသဘောမြားနဲ့လူမှု့ပတျဝနျးကငျြ အတှကျ ရငျလေးစရာစရိုကျမြား
ဒယ်နီ ၊ ဒယ်ပြာ သုံးသူတိုင်းသိထားသင့်သည့် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးများ
မိတ်ဆွေကောင်းတို့ အိမ်အများစုမှာ ဒယ်နီ ဒယ်ပြာ ဒယ်ခရမ်း တို့ကို တော်တော်များများ အသုံးပြုကြမှာပါ။ အလုံးပေါင်းမနည်း ပျက်လိုက် ဝယ်လိုက်နဲ့ ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလို ဝယ်ပြီးတာနဲ့ စနစ်တကျ တန်းသုံးတတ်တဲ့ လူတွေလည်း တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကောင်းတွေ အတွက် အသုံးတဲ့ စေမယ့် အချက်လေးတွေ ကျွန်တော် ထပ်ထည့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ 1️. ဒယ်နီအများစု အားလုံးနီးပါးမှာ မီးဆွဲအား 2000W ရှိပြီး မီးအတိုး အလျော့ လုပ်လို့ ရတာကြောင့် Extension Cord (ကြိုးခွေအဝိုင်းများ)နှင့် လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး။ 2️. အခုနောက်ပိုင်း ထွက်သမျှ ဒယ်နီတွေမှာ Auto cut-off system (အလိုလျောက်မီးဖြတ်ပေးတဲ့စနစ်) ပါလို့ အတိုးအလျော့ ဘုလေးကို … Read more
ဖငျပွားတာကောငျးလား ဖငျကွီး တာကောငျးလား
January 19, 2021 January 19, 2021 by Online Hartha
တကယ်တော့ ဖင်ပြားတာဟာ ညလေးတို့တွက်​မကောင်းပါဘူး ဘာကြောင့်လည်းဆို​တော့ ကွီးပြောပြမယ်​ ဖင်​ပြားရင်​ Like ကမရ Like မရ​တော့ စိတ်​ကမကြည်​ စိတ်​မကြည်​​တော့ ​ရန်​​တွေဖြစ်​ မနိုင်​​တော့ ဖင်​တု​ပြေးဝယ်​ ဖင်​တုနဲ့ ဓာတ်​ပုံရိုက်​ မရိုက်​တတ်​​တော့ အတုမှန်းသိသာ လူတကာ ကဲ့ရဲ့ခံရ စိတ်​ဓာတ်​​တွေကျပြီး ​ဖေ့ဘုတ်​မသုံး​တော့ ​ဖေ့ဘုတ်​မသုံး​တော့ လင်​ကမရ အပျိုကြီးဖြစ်​ .. ပိုပြီး​​ဒေါသထွက်​လာ ​ဒေါသ​ကြောင့်​ ​ရောဂါရ ​ဆေးရုံတက်​ .. ​ရောဂါကု ပိုက်​ဆံကုန်​ .. ​သူ​တောင်းစားဖြစ်​ အစာနပ်​မမှန်​​တော့ လူကပိန်​ချုံး ဝဲ​တွေစွဲ .. အသက်​ကလည်းကြီးလာ ​နောက်​ဆုံး ဘိုးဘွားရိပ်​သာ​ရောက်​ .. ​ဂေါက်​ ! ကဲ .. မ​ပြောဘူးလား ဖင်​ပြားတာ ည​လေးတို့အတွက်​ အန္တရာယ်​ရှိတယ်​ ဒါ​ပေမဲ့ ဖင်​ကြီးတာကြ​တော့ ဘာ​ကောင်းလည်းဆို​ … Read more
“စှနျ၊ ကွကျတူရှေးနှငျ့ သာလိကာမြား ရောငျးခသြူမြားကို သဈတောဦးစီးဌာနက အရေးယူမညျ”
“စွန်၊ ကြက်တူရွေးနှင့် သာလိကာများ ရောင်းချသူသုံးဦးကို သစ်တောဦးစီးဌာနက အရေးယူမည်” ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ထောက်ကြန့်မြို့နယ်တွင် စွန်ငှက်အပါအဝင် ကာကွယ်ထားသော ကျေးငှက်တိရစ္ဆာန်များ ရောင်းချနေသူသုံးဦးကို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၁ (က)ဖြင့် အရေးယူမည်ဟု အင်းစိန်သစ်တောဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိဦးဖိုးလတ်ကပြောသည်။ ထောက်ကြန့်မြို့နယ် လှော်ကားလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့် တွင် ကျေးငှက်များ ရောင်းချနေ သည်ဟု သတင်းရသဖြင့် အင်းစိန်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနက သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ စွန်တစ်ကောင်၊ သာလိကာ ခြောက်ကောင်၊ ကြက်တူရွေး ၃၂ ကောင် ရောင်းချနေသူသုံးဦးကို တွေ့ရှိခဲ့ သည်။ ‘‘ဒါတွေက လုံးဝ ကာကွယ်ထားတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထောက်ကြန့်ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ’’ ဟု ဦးဖိုးလတ်ကပြောသည်။ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ … Read more
သေသွားတဲ့ ကောင်မလေးပဲ လှတယ်ထင်နေတာ…​ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ပိုလှနေတယ်
သေသွားတဲ့ ကောင်မလေးပဲ လှတယ်ထင်နေတာ…​ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ပိုလှနေတယ် နောက်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ လာကြိုသည့်သူနှင့်အတူ..မိန်းကလေးတစ်ယောက် သေဆုံးသွားသည်။ သူ … ဒါကို သတိထားမိတဲ့အချိန် သေမင်းဟုယူဆရသည့် ဝတ်ရုံနက်ခြုံထားသောလူကြီးက သူ့ဘေးရောက်နှင့်နေပြီ။ လက်ထဲမှာလည်း တစ်ဖက်က သူကိုင်နေကျ တူရွှင်းအရှည်ကြီးနှင့်။ နောက်တစ်ဖက်မှာ လက်ဆွဲသေတ္တာလေးတစ်ခုနှင့်။ သေမင်းက …ထိုမိန်းကလေးကိုပြောသည်၊”လာ … ကလေးမလေး သွားဖို့ အချိန်တန်ပြီ” မိန်းကလေး —“ဟင် … မြန်လိုက်တာ …သမီးမှာ လုပ်စရာ အစီအစဉ်တွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်” သေမင်း —“တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။အချိန်မရှိတော့လို့ပါ …” မိန်းကလေး —“ဦးလက်ထဲက သေတ္တာထဲမှာ …ဘာတွေထည့်ထားတာလဲ?” သေမင်း -“မင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ” မိန်းကလေး –“သမီးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဥစ္စာတွေ ဟုတ်လား ? ဦးဆိုလိုတာ သမီးရဲ့အဝတ်အစားတွေ၊ ရွှေတွေ … Read more
ထီပေါကျရငျ သားက ကြောငျးပဲပွနျတကျခငျြတာဆိုတဲ့ ထီရောငျးတဲ့ ကလေးလေးရယျ
ထီပေါက်ရင် ကားပြန်ဝယ်ပေးမယ်လို့ ပြောတော့ သားက ကျောင်းပြန်တက်ချင်တာဆိုတဲ့ ထီရောင်းတဲ့ ကလေး ဘဝမှာ စားဝတ်နေရေးအခြေအနေကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရုန်းကန်နေရသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ် သူတို့ဘဝတွေဟာ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့လိုသလို တတ်နိုင်သူတွေကလည်း ဘေးကနေဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုပါတယ် ဒါမှသာ ဆင်းရဲမှုတွေလျော့ပါးပြီး လူတိုင်းအေးဆေးနေနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကလည်း အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ထီရောင်းနေတဲ့ ကလေးလေးတစ်ဦးရဲ့ ကျောင်းတက်ချင်တဲ့ အိပ်မက်လေးတစ်ခုအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအကြောင်းလေးကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ခုလို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်… ချစ်လိုက်တာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရင်ထီထိုးမယ် ဆိုတော့.ရိုက်ပါအန်တီ ရိုက်ပါ သားဆီမှာထီထိုးပါတဲ့သူရွေးပေးတဲ့ ၁၀စောင်တွဲယူတော့ ဖုန်းနံပါတ်ရေးတယ် လက်ရေးက ခနော်ခနဲ့ ဘယ်နှတန်းအထိကျောင်းနေဖူးသတုံးဆိုတော့ ၅တန်းနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ရတာတဲ့ တို့တိုင်းပြည်က မဖူးခင်ကြွေရတဲ့ပန်းတွေ သူထီရောင်းနေတဲ့လမ်းက စာသင်ကျောင်း နဲ့ကပ်လျက် စာသင်ခန်းထဲကစာအံသံတွေလမ်းမကကြားနေရတယ် ကလေးရယ်သူလည်း ကျောင်းနေချင်ရှာမှာပဲ အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေစာသင်ခန်းထဲမရှိပဲ လမ်းပေါ်မှာရှာဖွေစားနေရတာမြင်ရရင်လေ အလိုလိုရင်ထဲမှာမကောင်းတော့ဘူး … Read more
“ကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်ပါလျက်နဲ့ ရေဆေးဆီလိုက်လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်သမားရဲ့ ဖုန်းကို အလစ်သုတ်သူ(ရုပ်သံ)” အောက်ဆုံးတွင်Vedioပါဝင်သည်… စီးလာတဲ့ကားမှအားမနာ ကားစီးနိုင်တဲ့လူတန်းစားထဲက ဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဟိုး. . .အောက်ဆုံးကို ရောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်ရပ်ပါ… သူ့ကိုယုံကြည်ပြီး ဖုန်းကို ဒီအတိုင်းထားလိုက်မိတာ . . ခုတော့ ထင်မှတ်မထားတာတွေ လုပ်သွားတယ်ဗျာ ၁၀.၁.၂၀၂၁ တွင် Ocean Thaketa ဆိုင်သို့ ရေလာဆေးသော ကားနံပါတ် 5D-3606 (Honda fit Gd1) မောင်းနှင်လာသော အကိုခင်ဗျာ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှ ဝန်ထမ်းတယောက်၏ လက်ကိုင်ဖုန်း (Redmi Note8) အား မေ့လျော့ကာဖြစ်စေ အမှတ်ယူမှား၍ဖြစ်စေ ယူဆောင် သွားချင်းအား တွေ့ရှိရ၍ မေတ္တာရှေ့ထားပီး ပြန်လည်လာရောက် အပ်နှင်းပေးပါရင် ကရုဏာပြုကာ ပို့စ်တင်အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းလေးရဲ့ လစာ … Read more
အငျပွငျထခွငျး သှေးယား၊လယေားအတှကျ အစှမျးထကျတဲ့နညျး
“သွေးယားလေယားအတွက် ” အစွမ်းထက်ဆေးနည်းကို ကိုယ်တိုင်ဖော်စပ်သုံးစွဲလိုသူများအတွက် သံပုရာသီး ၁၀လုံး အရည်ညှစ် ဆနွင်း ၂ ပဲသား အနီရောင်ထုံးအနည်းငယ်ကို ၎င်းသံပုရာရည်နှင့် ဆနွင်းအရောထဲထည့်ပြီးမွှေပါ။ အနီရောင်ထုံးထည့်ရာတွင် ပန်းရောင်သမ်းယုံသာထည့်ရပါမည်။ ၎င်းဆေးကို တစ်ရက်သုံးကြိမ်ခန့် ယားယံနေသောနေရာတွင် လိမ်းပေးပါက အင်ပြင်ထခြင်း သွေးယားလေယားကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါသည်။ ၎င်းဆေးကို ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းသူမှ ပြောပြသဖြင့် စာဖတ်သူများအတွက် စေတနာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်။ Unicode Version “သှေးယားလယေားအတှကျ ” အစှမျးထကျဆေးနညျးကို ကိုယျတိုငျဖျောစပျသုံးစှဲလိုသူမြားအတှကျ သံပုရာသီး ၁ဝလုံး အရညျညှဈ ဆနှငျး ၂ ပဲသား အနီရောငျထုံးအနညျးငယျကို ၎င်းငျးသံပုရာရညျနှငျ့ ဆနှငျးအရောထဲထညျ့ပွီးမှပေါ။ အနီရောငျထုံးထညျ့ရာတှငျ ပနျးရောငျသမျးယုံသာထညျ့ရပါမညျ။ ၎င်းငျးဆေးကို တဈရကျသုံးကွိမျခနျ့ ယားယံနသေောနရောတှငျ လိမျးပေးပါက အငျပွငျထခွငျး သှေးယားလယေားကို ယူပဈသလို ပြောကျကငျးသကျသာစပေါသညျ။ ၎င်းငျးဆေးကို … Read more